गर्ने हो कि खुर्सानीले मालिस ? यस्ता छन् फाइदा | Rajmarga
खुर्सानी मुखमा पर्ने बित्तिकै तिब्र जलन किन हुन्छ ? खुर्सानीको यही गुण प्रयोग गरेर मांसपेशीहरुलाई आराम पनि दिलाउन सकिन्छ।
मानिससहित कयौ जीवको शरीरमा कयौ विशेष प्रकारका रिसेप्टर हुन्छन् । त्यसैमध्ये एक हो पालिमोडल नोसिसेप्टर । यो रिसेप्टर जिब्रो, नाक, आँखा र छालाका कोशिकाहरुमा पाइन्छ । धेरै गर्मी हुने बित्तिकै पोलिमोडल नोसिसेप्टर सक्रिय हुने गर्दछ । खुर्सानीमा क्याप्सेसिन र पाइपराइन नामको रसायन हुन्छ । यो रसायन पालिमोडल नोसिसेप्टरको सम्पर्कमा आउने बित्तिकै तिब्र गर्मी उत्पन्न हुन थाल्छ र हामीलाई खुर्सानीको पिरो लाग्छ ।
खुर्सानीको विपरीत धनियाँ खाँदा यो रिसेप्टर चिसो हुन लाग्छ । र, मुख र घाँटीमा चिसो महशुस हुन्छ । वास्तवमा यो रिसेप्टरले तापमान र खानपानका बारेमा हाम्रो दिमागलाई सन्देश पठाउने काम गर्दछ । खुर्सानी र मासुले यही रिसेप्टरलाई उल्झाइदिने गर्दछ ।
खुर्सानीको जलको प्रयोग औषधिहरुमा पनि खुबै गरिन्छ । खुर्सानी मांसपेशीसम्बन्धी समस्या समाधानमा बरदानभन्दा कम हुँदैन । पिरो खुर्सानीलाई तेलमा डेढदेखि दुई महिना भिजाउनुस् । त्यसपछि यो तेलबाट सख्त भइसकेको वा दुखिरहेको ठाउँमा मालिस गर्नुस् ।
मालिसका साथसाथै तेलमा घुलेको कैप्सेसिन र पाइपारइनले असर देखाउन थाल्नेछ । र, छाला र मांसपेशीमा गर्मी उत्पन्न हुन थाल्नेछ । यसबाट रक्त प्रवाह राम्रो हुनेछ र पीडा र ऐंठनबाट पनि आराम पाइन्छ ।एजेन्सी
Previous post: सुखी र सन्तुष्ट जीवनका लागि यस्तो रहेछ सेक्सको भूमिका
Next post: नेपालसहित पाँच देश, पाँच आमा, तर प्रशव पीडा र मातृत्वको भाषा एउटै (तस्वीर कथा)
समयमा परीक्षण गर्न सके क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिन्छ
यी ६ खानेकुराले घटाउँछ स्मरण शक्ति
महिलाले किन राख्नु पर्छ आफूसँगै कन्डम ? (हेरौँ भिडियो)
च्याउ खाँदा स्मरणशक्ति र मस्तिष्कमा क्षय हुने जोखिम घट्न सक्छ ?